Blackberry ịkwụsị ịdị na-ekwentị mkpanaaka na ! - News Ọchịchị
Blackberry ịkwụsị ịdị na-ekwentị mkpanaaka na !
Canadian ụlọ ọrụ ebiliri ibe-elekwasị anya na software ọ mgba iji mpi dị ka mobile ọrụ na-ahọrọ touchscreens
Isiokwu a na-akpọ “Blackberry ịkwụsị ịdị na-phones” e dere site Angela Monaghan, n'ihi na The Guardian on Wednesday abalị 28 nke ọnwa September 2016 15.05 UTC
Blackberry na-mechisịrị ọnụ ala ya na ekwentị azụmahịa mgbe 14 afọ nke na-eme ka handsets.
The ụlọ ọrụ na ngwaọrụ ndị nọbu ekwentị nke oke maka ndị ọkachamara, nye ohere nnweta ozi ịntanetị na-aga n'ihu, ma Blackberry agbalịwo ịnọgide na mpi si rivals Apple na Samsung ka mobile ọrụ na-esiwanye na-ahọrọ touchscreens.
The Canadian ụlọ ọrụ na-now na-elekwasị anya na-eme ka software na ga outsource rụpụta nke ngwaike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
John Chen, ụlọ ọrụ Executive onyeisi oche na onye isi, kwuru: "Anyị na-elekwasị anya software mmepe, gụnyere nche na ngwa. The ụlọ ọrụ na-ezube niile kwụsị esịtidem ngwaike mmepe na ga outsource na ọrụ na-mmekọ. Nke a na-enye ohere ka anyị na-belata isi obodo chọrọ ma welie nloghachi na nyekwara isi obodo. "
Chen kwuru tupu afọ a na ya ga-mara site na September ma ọnwụ-eme handset azụmahịa O yiri ka ha ghọọ uru.
John Jackson, nyocha na IDC, kwuru Blackberry mkpebi ịkwụsị ịdị na-ngwaọrụ bụ "kpamkpam ezi uche ma na-eleghị anya igabiga". o kwukwara: "Software revenue na-njikọ profaịlụ metụtara na ọ bụ ebe ahụ na-elekwasị anya kwesịrị ịdị na-, na now nwere ike ịbụ. "
CMC Markets kwuru ọnwụ nke blackberry handset kara akara ọgwụgwụ nke oge maka otu ụlọ ọrụ otu ugboro atụle otu n'ime ụwa isi smartphone mgbere. CMC kwuru na na ya elu na September 2013, ha dị 85 nde Blackberry debanyere aha n'ụwa nile, ma site March 2016 ọnụ ọgụgụ adaala ka 23 nde ka ọ furu efu pua rue Android na iOS nyiwe.
Related: iPhone 7 nyochaa: otú ezi nwere ike a na ekwentị abụ ma ọ bụrụ na batrị adịghị adịte ọbụna a ụbọchị?
Colin Cieszynski, isi ahịa nyocha na CMC, kwuru: "Taa n'egosi a big mgbanwe maka Blackberry na njedebe nke oge maka ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ na-ezube ịgbanwee ya na-elekwasị anya nke ọma ka nkwukọrịta na nche software mmepe, mbenata isi obodo chọrọ ma na-amụba n'akụkụ peeji. "
Blackberry mbak bilie tupu oge ndị ahịa trading mgbe ọ mara ọkwa mma karịa na-atụ anya enwetakwa maka nke abụọ nkeji iri na ise na adi elu enwetakwa-atụ anya ya afọ ka a nso nke efu na ise cents a òkè, jiri ya tụnyere ugbu a ahịa na-atụ anya nke a 15-amụma ọnwụ.
Cieszynski kwuru ahịa e shrugging anya a shortfall ke ụtụ, nke di ala karịa na-atụ anya na $ 352m. "Ahịa kpebiri ilekwasị anya 89% revenue ibu n'elu afọ-ha software ọrụ azụmahịa,"Ka o kwuru.
Blackberry-mara ọkwa na ya isi ego mara, James Yersh, na-ahapụ ụlọ ọrụ na njedebe nke October n'ihi mkpebi onwe onye. Ọ ga-anọchi Steven Capelli, ndị nke mbụ Sybase Executive.
New album Aims iji kpọlite ​​Jackson si kpakpando p ...
Mmadụ Bịa ka The robot-Dabere Workforce
Asteroid ime ka nso ngafe site Earth
New ule azụ echiche maka urughuru physics: CERN
21460	4 Angela Monaghan, Nkeji edemede, Blackberry, Business, Mgbakọ, Main ngalaba, mobile igwe, News, Smartphones, software, Technology, telekomunikashions ụlọ ọrụ
← MacOS Sierra: Top ise Ihe Ị Mkpa Ịmata Ihe Apple si New Mac Software Nke Keyboard na Òké M Kwesịrị Zụrụ My PC? →